Egwuregwu Gartic Phone Na gam akporo NA IOS ❤️ GOLUEGO.COM
You chọrọ ịma ka esi egwu egwu Gartic Phone ma sonye n’ahu ikpo oku n’uwa? Mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, n'ihi na anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma.
LEE aghụghọ nke GARTIC PHONE
Gartic (Android | iOS | Weebụ) bụ egwuregwu na-ewu ewu na ịkọ nkọ. Kewara n'ime agba, otu onye ọkpụkpọ ga-ese otu okwu, ebe ndị ọzọ nwere ebumnuche nke ịkọ nkọ, na-enweta isi ihe n'usoro azịza ziri ezi.
N'èzí cell cell? Hụ egwuregwu 10 dị oke egwu maka gam akporo na iOS
Igba egwuregwu si gị gam akporo ekwentị gị TV na Chromecast
Omuma emeghariri: otu esi egwu Kwue na ndi enyi
Egwuregwu ahụ wepụtara na mbụ maka ihe nchọgharị, mana ọ nwekwara ụdị mkpanaka maka gam akporo na iOS. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịsọ mpi megide ndị egwuregwu na ngwaọrụ ọ bụla, kpọọ egwuregwu ngwa ngwa ma mepụta ụlọ na ndị enyi site na ekwentị mkpanaaka gị. Lee ka esi egwu!
Egwuregwu Gartic Phone: Egwuregwu ngwa ngwa na ekwentị mkpanaaka
Nzọụkwụ 1- Download ngwa sitere na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa;
Nzọụkwụ 2: tinye egwuregwu ma họrọ "Gwuo na enweghị ndebanye";
Egwuregwu ahụ na-enye gị ohere ịbanye ọkụ na-enweghị ike ịmepụta akaụntụ
Nzọụkwụ 3: họrọ aha nwa oge na avatar site na-agbanwe n'etiti akụ.
Tinye aha ma họrọ avatar
Nzọụkwụ 4: na ihuenyo ọzọ, họrọ otu isiokwu ịkpọ;
Họrọ site na isiokwu dị iche iche
Nzọụkwụ 5- A ga-akpọrọ onye ọkpụkpọ ahụ gaa n’ụlọ ọha na eze. Mgbe ndị ọzọ na-ese, dee ihe ị chere na igbe ederede. Ngwa ngwa ị nwetara ya, ihe ndị ọzọ ị ga-enweta. Ndu ndú ahụ dị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ, onye mmeri bụ onye ọ bụla ruru akara ịgba maka ụlọ ahụ.
Dee ihe ị chere n’ọhịa
Nzọụkwụ 6: na ntụgharị aka gị ịdọrọ, ngwa ahụ ga-egosi okwu gburugburu. Nwere ike ịhọrọ ise ya ma ọ bụ wụgharịa uzo;
Dọrọ okwu iji see
Nzọụkwụ 7: jiri mkpịsị aka gị see foto na ihuenyo. Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe agba na ọdịdị.
Gosipụta nkà gị site na ịbịaru egwuregwu ahụ
Gartic: otu esi emepụta ime ụlọ
Nzọụkwụ 1- Naanị ndị ọrụ e debara aha ha nwere ike ịmepụta ime ụlọ. Iji mee nke a, na ihuenyo ụlọ, họrọ "Mepụta akaụntụ";
Mepụta log log
Nzọụkwụ 2- Tinye ozi dị ka aha otutu, email, paswọọdụ na profaịlụ foto iji mepụta akaụntụ gị;
Dejupụta ozi achọrọ
Nzọụkwụ 3: na ihuenyo ọchụchọ egwuregwu, họrọ "Lelee ime ụlọ omenala";
Mepee ụlọ omenala
Nzọụkwụ 4: wee pịa bọtịnụ «Mepụta ime ụlọ»;
Mepụta ime ụlọ na egwuregwu ahụ
Nzọụkwụ 5- Tinye aha, isiokwu, ịgba ịgba, na paswọọdụ (nhọrọ). Lọ nke ọ bụla nwere ikike mmadụ iri ise;
Hazie nhọrọ ime ụlọ gị
Nzọụkwụ 6: Na ime ụlọ emere, họta biputere na Twitter ma ọ bụ detuo njikọ ụlọ ịkekọrịta.
Kọrọ ndị mmadụ ụlọ
Ebe ịchọta echiche maka Gartic Phone - Nke kacha mma…